I-Goodbye Block kunye ne-Inline-Wamkelekile i-HTML5 > UVielhuber uDavid
I-Goodbye Block kunye ne-Inline-Wamkelekile i-HTML501
Izinto ezintsha ezichaziweyo ze-HTML5 zininzi kwaye uninzi lwazo sele luxhaswe sisininzi se-browser yomhlaba-apha ngezantsi ndifuna ukubonisa utshintsho olunomdla kwimithetho yezinto zokuhlalisa. I-HTML ihlala yahlula phakathi kwebhloko kunye nezinto ezisemgceni. Inkcazo yohlobo loXwebhu lwe -HTML4, umzekelo, amagama h1, p, kunye ne-div njengezinto zebhloko kunye, nesithuba, img njengezinto ezisemgceni.
Le ngcamango ngoku ishiywe (ngenxa yezizathu ezifanelekileyo). Ngamanye amaxesha, uninzi lwabayili bewebhu abawukhathalelanga ukuchaneka komgaqo wokuhlala kwindlwana wokuba akukho zinto zebhloko zinokubekwa ngaphakathi kwezinto ezisemgceni, okanye indlela yokuziphatha esemgangathweni usebenzisa imigaqo yeCSS enje nge display: inline; okanye bonisa: ibhloko; (ehlala ikhokelela kwikhowudi engasebenziyo) ngaphandle kokuqhubeka.
I-HTML5 ngoku iyathambisa lo mahluko kwaye inamagama ngeendidi ezili-9 ezahlukeneyo apho into inokuba yeyayo, apho into inokubakho kwiindidi ezininzi. Umahluko wakudala phakathi kwebhloko kunye nezinto ezisemgceni ziphoswa elwandle kwaye uninzi lweentsingiselo zeethegi kwiwebhu ziyaqwalaselwa. Ngokukodwa, oku kunesiphumo sokuba ezi zinto zilandelayo zakha ikhowudi efanelekileyo:
Isikhongozeli esipheleleyo esiqulathe izinto zebhlokhi ngaphambili sasinokwenzeka kuphela (sinekhowudi esebenzayo) sisebenzisa amaqhinga (umzekelo, ngokumisa ngokupheleleyo komaleko odityanisiweyo). Ngenye indlela, unxibelelanise isihloko kunye nomhlathi-oku kukhokelele kuncedo kwaye isikhongozeli asicofeki. Ngokongezwa okwamkelekileyo kwi-HTML5, oku akusengxaki.